အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဥရောပ Find ရန်ကဘယ်လို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဥရောပ Find ရန်ကဘယ်လို
မင်းကိုလည်ပတ်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့ ဥရောပ လလာမည့်စုံတွဲအတွက်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်နှင့်မိတ်ဆွေများကမတိုင်မီအားလပ်ရက်အပေါ်စီစဉ် ကောလိပ်ကျောင်းမှဦးတည်. ဖြစ်ကောင်း, သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောအားလပ်ရက်ပေါ်တွင်သင်၏မိသားစုယူချင်. ကောင်းစွာ, သင်သည်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ရာ၌ခန့်ထားပြီ.
ဥရောပအားလုံးတစ်နှစ်ကြာမြင့်စွာအဘို့အညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါသည် ခရီးသွားလာ, အဆိုပါနွေရာသီတွင်သို့မဟုတ် ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်း, အခါမိမိအိမ်. သငျသညျအလည်အပတ်ခရီးရန်သင့်သောနေရာများပေါ်တွင်မှတ်သားတစ်ဝက်သောနေရာများသို့သွားရောက်နိုင်မည်မပြုစေခြင်းငှါပေမယ့်ရထားနှင့်အတူကဥရောပမှာခရီးသွားပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည်.
ဥရောပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအများစုမှာစဉ်အတွင်းအေးမြများမှာ နွေရာသီအချိန် အဖြစ်ကောင်းစွာ. သို့သျောလညျး, တူသောအချို့နေရာများ ပဲရစ်, ဘာစီလိုနာ, Ibiza, နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူလာ တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးသာယာရာသီဥတု.
Montpellier to Toulouse ရထားလက်မှတ်များ
Toulouse ရထားလက်မှတ်တွေမှ Nice
ပဲရစ်မှ Toulouse ရထားလက်မှတ်တွေ
Marseille Toulouse ရထားလက်မှတ်တွေ
ဥရောပသို့မဟုတ်နိုင်ငံအများန်းကျင်အားလုံးတွေ့မြင်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရထားလမ်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်. ရထားလက်မှတ်တွေကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းနှင့်ရထားမှတဆင့်ခရီးသွားလာတဲ့အခါသင်ရှုခင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်. သင်ဘယ်လိုယ်ယူနိုင်ပါသည် စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေဥရောပ?
ဥရောပအတွက်စံပြခရီးစဉ်အလယ်ပိုင်းဥရောပမှတဆင့်ပါလိမ့်မယ်, ဘယ်မှာသင်လုပ်နိုင်သည် သြစတြီးယားနဲ့တူခရိုင်မှတဆင့်ကူး, ဆွစ်ဇာလန်, နှင့် ပြင်သစ်. သဘာဝအလှအပသူ့ဟာသူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်. ထည့်မပြောပါနှင့်, လူအများတွင် အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာအလွန်ရှိပါတယ် အထောကျအကူမြားနှငျ့မျိုး.
ဥရောပ၌ရထားလက်မှတ်တွေ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တစ်ဦးကယခုခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု – ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်. သငျသညျမြားအဘို့အ, ဥရောပထဲက based, ရထားလက်မှတ်တွေ booking အဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူညှိနှိုင်းရပါလိမ့်မယ်. သငျသညျဥရောပကနေတဲ့အခါ, ထို့နောက် Save ကိုတစ်ဦးကရထားထဲမှာသင်ပိုမိုအင်တာမီလန်ရထားလမ်းသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာထက်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, စျေးနှုန်းများအာမခံချက်ကိုအကောင်းဆုံးရထားလက်မှတ်တွေ.
ဥရောပတဆင့်ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာသည့်အခါ, သငျသညျမပြုစေခြင်းငှါ အကျိုး ကမှတဆင့်အများကြီး. သငျသညျဥရောပတစ်လျှောက်လုံးတန်ဖိုးနည်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သော်လည်း, ရထားပေါ်တွင်ခရီးစဉ်အခြားသူများကိုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူ လာ.. ရထားခရီးစဉ်များကပိုပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိပါတယ်, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာထက်.
ရထားမှ Nice သို့လိုင်ယွန်
ရထားအားဖြင့် Nice မှပဲရစ်
ရထားဖြင့် Nice သို့ Avignon
ရထားဖြင့် Nice သို့ Marseilles
သြစတြီးယားနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတူသောနိုင်ငံများလုံလောက်သောအတူသင်တို့သည် သဘာဝအလှအပရှုခင်းများ. ရထားခရီးဟာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူကွန်နက်ရှင်၏ညာဘက်မျိုးရှိ. သငျသညျအလားတူနေရာများမှခေါင်းနှစ်လုံးသူဤမျှလောက်များစွာသောသည်အခြားခရီးသည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရ.
ဖြစ်ကောင်း, သငျသညျစိတ်အဘယ်သူတူတစ်စုံတစ်ယောက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်. အပြင်ကနေ, သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ် ဘဏ္ဍာရေးရှုထောင့်. ပြီးတာနဲ့သြစတြီးယားနဲ့တူဒေသများမှခေါင်းနှစ်လုံး, ဒိန်းမတ်, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်, သင်သည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
သို့သျောလညျး, နယ်သာလန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နှင့်ပြင်သစ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်အလင်းဖြစ်ကြ၏. ဖြစ်ကောင်း, သင်သည်သင်၏စီးစီစဉ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအွန်လိုင်းခရီးသွားလမ်းညွှန်များ၏အကူအညီဖြင့်ဥရောပတိုက်တွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်. ဒါကလမ်း, သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ် ထိုနည်းတူ.
အမ်စတာဒမ် Thalys ရထားသို့ဘရပ်ဆဲလ်
အမ်စတာဒမ် Thalys ရထားမှပဲရစ်
သငျသညျစျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေဖို့အဆင်သင့် Are? the best website is တစ်ဦးကရထား Save
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/how-to-find-the-best-deals-for-cheap-train-europe-tickets/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#traveleurope ချစ်တယ် နင် .ရာဝတီ europetrains europetravel
ရထားလက်မှတ်ဖိုးများတွင်ငွေ Save လုပ်နည်း
ရထားဘဏ္ဍာရေး, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား